Xiaomi Black Shark 2 Pro: toetra teknika tafaporitsaka | Androidsis
Lasa lamaody mihabe ny telefaona filalaovana. Mihabetsaka ny mpanamboatra miloka amin'ity karazana vahaolana ity, smartphone milalao ahafahantsika mamindra ny anaram-boninahitra farany tsy misy olana. Ary iray amin'ireo mpampalaza azy lehibe indrindra ny Xiaomi sy ny faritra Black Shark. Vao tsy ela akory izay no nanehoanay ny hevitray taorian'izay hadihadio ny Black Shark 2. Ary toa modely Pro no ho avy.
Tsy ilay sambany nahare momba an'io maodely io isika, ary ankehitriny vitsivitsy Fehizoro Xiaomi Black Shark 2 Pro tena nahagaga anay izany. Toa te hahagaga antsika ny orinasa vaovao amin'ny alàlan'ny finday vaovao, ary hanao izany izy!
Ireo no toetra mampiavaka ny Xiaomi Black Shark 2 Pro
Araka ny hitanao amin'ny sary izay mitarika ireo andalana ireo, dia namakivaky ny GeekBench izay nahafahanay nahita ny ampahany amin'ireo toetra ara-teknikan'ilay terminal, izay nahitanay zavatra tsy ampoizina roa tena mahaliana. Amin'ny lafiny iray, manana ny zava-misy isika fa ho avy ny Xiaomi Black Shark 2 Pro miaraka amin'ny RAM 12 GB.
Zava-misy tokony hodinihina io, na dia tsy dia mahatalanjona loatra aza. Eny, asshole an'ny RAM izy io, saingy antenaina fa ny telefaona gaming amin'ity karazana ity dia manana io vola be io. Saingy, ny gaga lehibe dia ao amin'ny mpanamboatra azy. Ary io dia, ny Xiaomi Black Shark 2 Pro dia handresy noho ny SoC Snapdragon 855+, kinova vita amin'ny vitaminina ao amin'ny satroboninahitry ny mpanamboatra amerikana, izay hisongadinan'ny fampisehoana an'ity smartphone vaovao ity hilalao .
Ary mitandrema, ny tsaho milaza fa ny Xiaomi Black Shark 2 Pro daty famoahana Ho akaiky kokoa noho ny nieritreretantsika azy io: afaka aseho amin'ny 30 Jolay ho avy izao. Ny vidiny? Tsiambaratelo, fa ny zavatra azo lojika indrindra dia ny tsy hihoarana ny 800 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ny Xiaomi Black Shark 2 Pro dia mampiseho hozatra amin'ny fantsom-panandramana vaovao
Huawei dia nanova ny sainy: hanohy hiloka amin'ny Android izy